Magaalada New York Hadda waxay u baahan tahay Caddaynta Tallaalka COVID ee Cunnada Gudaha, Jimicsiyada iyo Tiyaatarada
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka » Magaalada New York Hadda waxay u baahan tahay Caddaynta Tallaalka COVID ee Cunnada Gudaha, Jimicsiyada iyo Tiyaatarada
Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • kariska • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Shopping • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
Shuruudda cusub ayaa la bilaabi doonaa illaa Ogosto iyo Sebtember waxayna u baahan doontaa in macmiisha soo galaya xarumaha qaarkood ay qaataan ugu yaraan hal qiyaas tallaalka Covid-19.
Magaalada New York waxay leedahay mid ka mid ah heerarka tallaalka ugu sarreeya dalka.
Qiyaastii 66% dadka qaangaarka ah ee New York ayaa durbaba la tallaalay.
Gobolka New York wuxuu ka mid ahaa meelaha ugu daran ee uu ku dhacay COVID-19.
Istaraatiijiyad cusub oo dagaal badan si dadka looga tallaalo COVID-19 ayaa lagu dhawaaqay New York City Duqa magaalada Bill de Blasio maanta.
Duqa magaalada NYC wuxuu xaqiijinayaa in waxqabadyada sida cunnada gudaha iyo ka qeybgalka jimicsiga ay dhowaan ahaan doonaan kuwa loogu talaalay cudurka coronavirus.
“Sida kaliya ee lagu ilaalin karo xarumahan gudaha waxay noqon doontaa haddii la tallaalo,” ayuu duqu ku dhawaaqay Talaadadii, isagoo ka walaacsan walaaca ku saabsan kala duwanaanshaha Delta oo si xawli ah ku faafaya.
Shuruudda cusub ayaa la bilaabi doonaa illaa Ogosto iyo Sebtember waxayna u baahan doontaa in macallimiinta soo galaya xarumaha qaarkood ay qaataan ugu yaraan hal qiyaas tallaalka Covid-19. Tan waxaa lagu caddeyn karaa kaarka tallaalka ama barnaamijyada tallaalka.
De Blasio ma uusan gaarin si gaar ah oo ku saabsan sida waajibaadka loo dhaqan gelin doono. Wuxuu sheegay in xeerarku ay dhaqan galayaan 16 -ka Ogosto, laakiin kormeerka lama sameyn doono ilaa 13 -ka September.
Maayarku waxa kale oo uu hore u shaaciyey in dhammaan shaqaalaha magaalada dhawaan laga rabaa in la tallaalo marka la gaadho bisha Sebtember, ama waa inay is -tijaabiyaan toddobaad walba.
Qiyaastii 66% dadka qaangaarka ah ee New York ayaa durbaba la tallaalay-mid ka mid ah kuwa ugu sarreeya dalka-laakiin gobolku wuxuu ka mid ahaa meelaha ugu daran ee uu ku dhacay COVID-19.